ဖုန်းသုံးသူတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ ဖုန်းဘက်ထရီအကြောင်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > ဖုန်းသုံးသူတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ ဖုန်းဘက်ထရီအကြောင်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 8:43 PM Android Tutorial, Tutorial, နည်းပညာဗဟုသုတ, နည်းလမ်းများ
၁) “ဖုန်းကို တစ်ချိန်လုံး ပလပ်ထိုးထားတာ ဘက်ထရီ ပျက်စီးစေတတ် ပါသလား”
ဖုန်းကို မည်မျှ ကြာကြာ အားသွင်းသင့်သလဲ? ဟူသော မေးခွန်းသည် မိုဘိုင်းဖုန်းများ စပေါ် ကတည်းက လူသားတွေ မေးလာ ကြသော မေးခွန်း ဖြစ်သည်။ ယခု ထိလည်း မေးနေကြဆဲ၊ ရှုပ်ထွေးနေ ကြဆဲလည်း ဖြစ်သည်။လူများစုကြီးကား မနက် ဖုန်းဘက်ထရီ အပြည့်နဲ့ အပြင် ထွက်သွားပြီး ညအိမ်ပြန် ရောက်ရင် အားကုန် နေသည့် ဖုန်းကလေးတွေ ပြန်ပါလာ တတ်သည်။ ညအိပ်ရာ ဝင်တော့ ဖုန်းကို ပလပ်ထိုး အားသွင်းပြီး အိပ်လိုက် တော့သည်။ မနက်နိုး လာလျှင် လူလည်း အားပြည့်၊ ဖုန်းလည်း အားပြည့်နေလိမ့်မည်။
ဖုန်းကို တစ်ညလုံး ပလပ်ထိုး အားသွင်း ထားတာ အန္တရာယ် မများဘူးလားဟု မေးချင်ကြ လိမ့်မည်။ သုံးလေး နာရီလောက် အားသွင်းလျှင် ဘက်ထရီ ပြည့်ပြီ ဖြစ်ရာ အားပြည့် ပြီးနောက်မှာပင် တစ်ညလုံး ပလပ်ဆက် ထိုးထားခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီတွေ ပူပြီး ပေါက်ကွဲ စေတတ် သလား စိတ်ပူသူ များလည်း ရှိသည်။ ထိုသို့ အားပြည့် သွားပြီးသည့်တိုင် အကြာကြီး ပလပ် ထိုးထားခြင်းကြောင့် ဘက်ထရီ ပျက်စီးစေ နိုင်သလား စိုးရိမ်သူ များလည်း ရှိသည်။
ဖုန်းဘက်ထရီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးချက်တွေ ကလည်း အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေသည်။ မယုံလျှင် အင်တာနက် ခေါက်ကြည့်ပါ။
တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေသော အကြံပြုချက် အများအပြား ကိုပါ တွေ့ရ လိမ့်မည်။ ဘယ်ဟာ အမှန်ဘယ်ဟာ အမှား ခွဲခြားရ ခက်တော့သည်။
အထက်ပါ အတိုင်း ဘက်ထရီ ပြဿနာ အဖြေရှာရင်း အဖြေ အမျိုးမျိုးကြား မျက်စိလည်နေသူများ အဖို့ တစ်ကယ်တမ်း ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ထားသည့် ဘက်ထရီ ပြဿနာ အဖြေရှာနည်း များကို အောက်တွင် တင်ပြသွား ပါမည်။ ဖြေကြားပေးသူကား ဖုန်းအားသွင်း အပို ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် ရောင်းချ နေသည့် Farbe Technik ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်သူ ရှိန်းဘရိုစကီ ဖြစ်သည်။
(၂) ဖုန်းကို တစ်ညလုံး ပလပ်ထိုးထားရင် ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။
တစ်ညလုံး ပလပ်ထိုးထား လို့တော့ ဖုန်းကို ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်
ပျက်စီးစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။
နောက်ထွက် လာတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေက သိပ်ကောင်းတယ်။ အားပြည့်သွားပြီ ဆိုတာနဲ့ ဓာတ်အား ဝင်နေ တာကို အလိုလျောက် ဖြတ်ချ လိုက်တယ်။ အဲဒီလို ဆိုတော့ အားပိုသွင်းမိပြီး
ဖုန်းပူလာ တာမျိုးလည်း မဖြစ်တော့ဘူး။
ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းကို တစ်ညလုံး ပလပ်ထိုး အားသွင်းထားရင် ဘက်ထရီ သက်တမ်း တိုတတ်တယ် ဆိုတာကော ဟုတ်လား။
Lithium-ion ဘက်ထရီတွေက အပူဒဏ် ကိုတော့ သိပ်မခံနိုင်ဘူး။ ဖုန်းကို ကာဗာစွပ် တာရင် အပူမထွက် တာကြောင့် ဖုန်း ဟာ ပူလာတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ဘက်ထရီပူလာပြီ ဆိုရင် ဘက်ထရီ ဆဲလ်တွေ ပျက်စီး တတ်တယ်။ အဲဒီလို ပျက်စီးရင် ဘက်ထရီ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းပြီး ဘက်ထရီ သက်တမ်း တိုတတ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကာဗာ မစွပ်ဘဲ ပုံမှန် အတိုင်းထားတဲ့ ဖုန်းတွေ ကတော့ ပူလာ ရင်တောင် အပူထွက် နိုင်တဲ့ အတွက် ဘက်ထရီ တအား ပူလာ တာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ဖုန်းကာဗာ စွပ်ထား တဲ့ လူတွေ အနေနဲ့ ညအိပ်ရင် ဖုန်းကို ပလပ်ထိုးအိပ်မယ် ဆိုရင် ကာဗာကို ဖြုတ်ထား ဖို့တော့ အကြံပြုလို ပါတယ်။ ဒါမှ ဖုန်းပူလာ ရင်တောင် အပူထွက်နိုင်တဲ့ အတွက် ဘက်ထရီ တအား ပူတက်လာ တာမျိုး မဖြစ်တော့ ဘူးပေါ့။
(၃) ဘယ်လိုမျိုး အားသွင်းတာ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်မလဲ။
ဘက်ထရီကို (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းကြားမှာ ပုံမှန်လေးရှိ နေအောင် ထိန်းပြီး အားသွင်းပေး ထားတာ အကောင်းဆုံးပဲ။
အဲဒီလို အားသွင်း ထားမယ် ဆိုရင် ဘက်ထရီထဲက အိုင်ယွန်း တွေဟာ အမြဲတမ်း ပုံမှန် လည်ပတ် အလုပ်လုပ် နေနိုင်တဲ့ အတွက် ကျန်းမာရေး ကောင်းတယ်။ အားလုံးဝ ကုန်သွား ရင် အိုင်းယွန်းတွေ ဆက်အလုပ် မလုပ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလိုပဲ အားအပြည့်ကြီး စွတ်သွင်း လိုက်ရင်လည်း အိုင်းယွန်းတွေရဲ့ ပုံမှန် လုပ်ငန်း စဉ်ကို နှောင့်ယှက်ရာ ရောက်တယ်။(၅၀) နဲ့ (၈၀) ကြားမှာ ရှိနေအောင် ထိန်းပြီး အားသွင်းမယ်ဆိုရင် အစွန်း နှစ်ဖက်လုံးက လွတ်တဲ့ အတွက် ဘက်ထရီ ဟာ ကျန်းမာ တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘက်ထရီကို (၅၀-၈၀) ကြားမှာ ရှိနေအောင် တစ်နေ့လုံး ထိန်းပြီး သွင်းပေး သင့်တယ်။ အကြာကြီး ပလပ်ထိုးထားဖို့ မလို ဘူး။ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရောက်လာပြီဆို ခဏ ပလပ်ထိုးထား လိုက်။ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း လောက် ရောက်ပြီဆို ပြန် ဖြုတ် ထားလိုက်။ ပြန်လျော့ သွားပြီဆို ခဏ ပြန်ထိုး လိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနိုင် ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို လုပ်ရတာ အလုပ်တော့ ရှုပ်တယ်။ လူ အတော်များများ လုပ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ ဘက်ထရီ သက်တမ်း အရှည်ဆုံး ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင် အလုပ် သင့်ဆုံး နည်းလမ်းမို့ လို့သာ ပြောပြတာပါ။ မလုပ်နိုင်တဲ့ လူတွေ အနေနဲ့လည်း စိတ်ပျက် နေစရာတော့ မလိုပါဘူး။
ဘက်ထရီ အကုန်ပြောင်အောင် သုံးပစ်ပြီး တဲ့နောက် အကုန်ပြည့်တဲ့ထိ တစ်လျှောက်တည်း သွင်းပစ် တာမျိုးတော့ လုံးဝ ရှောင်။ သုည ရာခိုင်နှုန်း ကနေ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းထိ တစ်ခါတည်း သွင်းပစ် တာမျိုးဟာ ဖုန်းဘက်ထရီကို လည်ပင်း ညှစ်တာပဲ။ ဘက်ထရီတွေဟာ အဲဒီလို သုညကနေ တစ်ရာထိကို ဘယ်နှခေါက်သာ ခံနိုင်တယ် ဆိုတာ စထုတ် ကတည်းက သတ်မှတ်ပေးထားတာ ရှိတယ်။
ကိုယ်က အဲဒီလို ဖုန်းဘက်ထရီကို လည်ပင်းများများ ညှစ်လေ သတ်မှတ်နှုန်း မြန်မြန် ပြည့်ပြီး ဘက်ထရီ မြန်မြန် အသက်ထွက်လေ ပါပဲ။ အဲဒီလို သုည ကနေ တစ်ရာကို အားသွင်းမိတဲ့ အကြိမ်တွေများ လာလေ ဘက်ထရီဟာ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာ လေပါပဲ။ ခဏလေးနဲ့ အားကုန် သွားတာ မျိုးကနေ လုံးဝကို သုံးမရ တော့တဲ့ထိ ဖြစ်သွားနိုင် ပါတယ်။
(၅) ဖုန်းဘက်ထရီ သက်တမ်း ကြာကြာခံအောင် ဘယ်လို အားသွင်း ပစ္စည်းတွေ သုံးရမလဲ။
ဖုန်းဝယ် ကတည်းက တစ်ခါတည်း တွဲပါလာတဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် အားသွင်းကြိုးတွေ၊ အားသွင်းတုံးတွေကို သုံးတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ တစ်ကယ်လို့ အော်ရီဂျယ်နယ်ဟာ ပျက်သွား ရင်လည်း အော်ရီဂျင်နယ် ကြိုးတွေ၊ အားသွင်းတုံးတွေ ကိုပဲ ထပ်ဝယ် သုံးတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ အော်ရီဂျင်နယ်တွေ ဈေးသိပ်ကြီး နေတာမျိုးနဲ့ တိုးလို့ မျက်ရည်ကျ ချင်ချင် ဖြစ်လာ ရင်တော့ ဈေးလည်း သက်သာ စိတ်လည်း ချရမှာ မျိုးတွေကို ဒုတိယ အဆင့် အနေနဲ့ စဉ်းစား သင့်တယ်။
ကိုယ့် ဖုန်းအမျိုးအစားမှာ သုံးနိုင်တဲ့ အခြားတံဆိပ်နဲ့ ဘက်ထရီတွေ၊ အားသွင်းကြိုး တွေကို အရင်ဆုံးရွေး။ ပြီးရင် ပါကင် တွေမှာ ရေးထား တာတွေ လိုက်ဖတ်ကြည့်။ စနစ်တကျ စမ်းသပ် ထုတ်လုပ် ထားတဲ့ ပစ္စည်း ဆိုရင် ဘယ်လို စနစ်တကျ စမ်းသပ် ထုတ်လုပ် ထားတယ်၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနဲ့ ဘယ်လို ညီညွတ်တယ်၊ ဘယ်လို ထောက်ခံချက် ရထားတယ် ဆိုတာတွေ ပါတယ်။
အဲဒီလို ဟာမျိုးတွေက အော်ရီဂျင်နယ် လောက် နီးနီးလည်း စိတ်ချရတယ်။ နာမည် ရထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်သုံး တာလည်း တစ်မျိုး စိတ်ချ ရတယ်။ နာမည် ရထား ပြီးသား ပစ္စည်းတွေဟာ အရည်အသွေး ကိုလည်း ထိန်း ကြတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ အားသွင်းကြိုးနဲ့ ဓာတ်အား လက်ခံနိုင်ပုံချင်း တူရဲ့လားလဲ သေချာ စစ်ဆေးဖို့ လိုတယ်။ ဖုန်းက ဝပ်ဘယ်လောက်၊ အမ်ပီယာ ဘယ်လောက် လက်ခံနိုင်လဲ သေချာကြည့်။ အားသွင်းကြိုး ကရော ဝပ်ဘယ်လောက်၊ အမ်ပီယာ ဘယ်လောက် ပေးနိုင် တာလဲ သေချာကြည့်။ နှစ်ခု ကိုက်ညီတယ် ဆိုမှဝယ်။ ဒါဆို အော်ရီဂျင်နယ် မဟုတ်ရင်တောင်မှ တော်တော်လေး စိတ်ချရ ပြီလို့ သတ်မှတ် နိုင်တယ်။
ဈေးပေါတာတွေကို သတိထား။ ဈေးပေါတဲ့ အားသွင်းကြိုးတွေ၊ အားသွင်းတုံး တွေဟာ အရည်အသွေးလည်း ညံ့တာ များတယ်။ စံချိန်စံညွှန်း မီအောင် မလုပ်ဘဲ၊ ပစ္စည်းဖြစ် ပြီးရော ဆိုတာမျိုး ထုတ်ထားတာမျိုးနဲ့ တိုးရင် အန္တရာယ်ပါ ကျရောက် နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးပေါတာတွေ ထဲမှာ တစ်ကယ် ကောင်းတဲ့ ဟာလေး တွေ လည်း ပါတတ် ပါတယ်။ အများစု ကတော့ စိတ်မချရ ပါဘူး။လန်ဒန် မီးသတ်ဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ပါ။ အရည်အသွေး မမီတဲ့ အိုင်ဖုန်း အားသွင်းကြိုး အတုတွေကြောင့် ဓာတ်လိုက်တာ၊ လက်မီးလောင် တာ၊ အိမ်ပါ မီးလောင်တာမျိုး တွေပါ ဖြစ်ပွားနေရ သတဲ့။ အားသွင်းကြိုး အသစ် ဝယ်လာပြီး ပြီဆိုရင် တစ်ညလောက် ဖြစ်ဖြစ် ပလပ်ထိုးထားကြည့် လိုက်ပါ။
ကိုယ်ကလည်း သတိလေး နဲ့တော့ စောင့်အိပ်ပေါ့။ မနက် ရောက်တဲ့ အခါ ဖုန်းလည်း တအား ပူတက်နေတာမျိုး မဖြစ်ဘူး၊ တစ်ခြား ပြဿနာလည်း မပေါ်ဘူးဆိုရင် စိတ်ချရတဲ့ ပစ္စည်းလို့ ယေဘုယျ သတ်မှတ် နိုင်တယ်။ ဖုန်းဘက်ထရီအတွက် အန္တရာယ် အကင်းဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်အောင် မူရင်း အားသွင်းကြိုး၊ အားသွင်းတုံးတွေကိုသာ အသုံးပြုပါ။ တစ်ခြား တံဆိပ်နဲ့ ဝယ်မည် ဆိုပါက အာမခံချက် သေချာပေးသော ပစ္စည်းများ ကိုသာ သုံးစွဲပါ။
-ဖုန်း အရမ်းမပူ ပါစေနဲ့။ ညဘက် ပလပ်ထိုး အားသွင်းပြီး အိပ်မည် ဆိုလျှင် ဖုန်း ကာဗာ ကိုတော့ ချွတ်ထား လိုက်ပါ။
-ဖုန်း ဘက်ထရီ အကျန်းမာဆုံး ဖြစ်စေ လိုလျှင် ဘက်ထရီကို (၅၀-၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ကြား ရှိနေအောင် ထိန်းပြီး အားသွင်းပေးပါ။
– ဘက်ထရီ လုံးဝ အားကုန်ပြီး ပိတ်သွားသည် အထိ မသုံးပါနဲ့။ ဘက်ထရီ သုည ရာခိုင်နှုန်းမှ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းသို့ တောက်လျှောက် အားသွင်းခြင်းမျိုး ကိုလည်း ရှောင်ပါ။
၁) “ဖုနျးကို တဈခြိနျလုံး ပလပျထိုးထားတာ ဘကျထရီ ပကျြစီးစတေတျ ပါသလား”
ဖုနျးကို မညျမြှ ကွာကွာ အားသှငျးသငျ့သလဲ? ဟူသော မေးခှနျးသညျ မိုဘိုငျးဖုနျးမြား စပျေါ ကတညျးက လူသားတှေ မေးလာ ကွသော မေးခှနျး ဖွဈသညျ။ ယခု ထိလညျး မေးနကွေဆဲ၊ ရှုပျထှေးနေ ကွဆဲလညျး ဖွဈသညျ။လူမြားစုကွီးကား မနကျ ဖုနျးဘကျထရီ အပွညျ့နဲ့ အပွငျ ထှကျသှားပွီး ညအိမျပွနျ ရောကျရငျ အားကုနျ နသေညျ့ ဖုနျးကလေးတှေ ပွနျပါလာ တတျသညျ။ ညအိပျရာ ဝငျတော့ ဖုနျးကို ပလပျထိုး အားသှငျးပွီး အိပျလိုကျ တော့သညျ။ မနကျနိုး လာလြှငျ လူလညျး အားပွညျ့၊ ဖုနျးလညျး အားပွညျ့နလေိမျ့မညျ။
ဖုနျးကို တဈညလုံး ပလပျထိုး အားသှငျး ထားတာ အန်တရာယျ မမြားဘူးလားဟု မေးခငျြကွ လိမျ့မညျ။ သုံးလေး နာရီလောကျ အားသှငျးလြှငျ ဘကျထရီ ပွညျ့ပွီ ဖွဈရာ အားပွညျ့ ပွီးနောကျမှာပငျ တဈညလုံး ပလပျဆကျ ထိုးထားခွငျးဖွငျ့ ဘကျထရီတှေ ပူပွီး ပေါကျကှဲ စတေတျ သလား စိတျပူသူ မြားလညျး ရှိသညျ။ ထိုသို့ အားပွညျ့ သှားပွီးသညျ့တိုငျ အကွာကွီး ပလပျ ထိုးထားခွငျးကွောငျ့ ဘကျထရီ ပကျြစီးစေ နိုငျသလား စိုးရိမျသူ မြားလညျး ရှိသညျ။
ဖုနျးဘကျထရီနဲ့ ပတျသကျပွီး အကွံပေးခကျြတှေ ကလညျး အမြိုးမြိုး ဖွဈနသေညျ။ မယုံလြှငျ အငျတာနကျ ခေါကျကွညျ့ပါ။
တဈခုနှငျ့ တဈခု ဆနျ့ကငျြဖကျ ဖွဈနသေော အကွံပွုခကျြ အမြားအပွား ကိုပါ တှရေ့ လိမျ့မညျ။ ဘယျဟာ အမှနျဘယျဟာ အမှား ခှဲခွားရ ခကျတော့သညျ။
အထကျပါ အတိုငျး ဘကျထရီ ပွဿနာ အဖွရှောရငျး အဖွေ အမြိုးမြိုးကွား မကျြစိလညျနသေူမြား အဖို့ တဈကယျတမျး ကြှမျးကငျြသူနဲ့ တှဆေုံ့ မေးမွနျး ထားသညျ့ ဘကျထရီ ပွဿနာ အဖွရှောနညျး မြားကို အောကျတှငျ တငျပွသှား ပါမညျ။ ဖွကွေားပေးသူကား ဖုနျးအားသှငျး အပို ပစ်စညျးမြား ထုတျလုပျ ရောငျးခြ နသေညျ့ Farbe Technik ကုမ်ပဏီကို ထူထောငျသူ ရှိနျးဘရိုစကီ ဖွဈသညျ။
(၂) ဖုနျးကို တဈညလုံး ပလပျထိုးထားရငျ ဘာဖွဈနိုငျလဲ။
တဈညလုံး ပလပျထိုးထား လို့တော့ ဖုနျးကို ကွီးကွီးမားမား ထိခိုကျ
ပကျြစီးစရာ အကွောငျး မရှိပါဘူး။
နောကျထှကျ လာတဲ့ စမတျဖုနျးတှကေ သိပျကောငျးတယျ။ အားပွညျ့သှားပွီ ဆိုတာနဲ့ ဓာတျအား ဝငျနေ တာကို အလိုလြောကျ ဖွတျခြ လိုကျတယျ။ အဲဒီလို ဆိုတော့ အားပိုသှငျးမိပွီး
ဖုနျးပူလာ တာမြိုးလညျး မဖွဈတော့ဘူး။
ဟုတျတော့ ဟုတျပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ ဖုနျးကို တဈညလုံး ပလပျထိုး အားသှငျးထားရငျ ဘကျထရီ သကျတမျး တိုတတျတယျ ဆိုတာကော ဟုတျလား။
Lithium-ion ဘကျထရီတှကေ အပူဒဏျ ကိုတော့ သိပျမခံနိုငျဘူး။ ဖုနျးကို ကာဗာစှပျ တာရငျ အပူမထှကျ တာကွောငျ့ ဖုနျး ဟာ ပူလာတာမြိုး ဖွဈတတျတယျ။ အဲဒီလိုမြိုး ဘကျထရီပူလာပွီ ဆိုရငျ ဘကျထရီ ဆဲလျတှေ ပကျြစီး တတျတယျ။ အဲဒီလို ပကျြစီးရငျ ဘကျထရီ အလုပျလုပျနိုငျစှမျး ကဆြငျးပွီး ဘကျထရီ သကျတမျး တိုတတျတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကာဗာ မစှပျဘဲ ပုံမှနျ အတိုငျးထားတဲ့ ဖုနျးတှေ ကတော့ ပူလာ ရငျတောငျ အပူထှကျ နိုငျတဲ့ အတှကျ ဘကျထရီ တအား ပူလာ တာမြိုး ဖွဈခဲ့ ပါတယျ။ ဖုနျးကာဗာ စှပျထား တဲ့ လူတှေ အနနေဲ့ ညအိပျရငျ ဖုနျးကို ပလပျထိုးအိပျမယျ ဆိုရငျ ကာဗာကို ဖွုတျထား ဖို့တော့ အကွံပွုလို ပါတယျ။ ဒါမှ ဖုနျးပူလာ ရငျတောငျ အပူထှကျနိုငျတဲ့ အတှကျ ဘကျထရီ တအား ပူတကျလာ တာမြိုး မဖွဈတော့ ဘူးပေါ့။
(၃) ဘယျလိုမြိုး အားသှငျးတာ အသငျ့တျောဆုံး ဖွဈမလဲ။
ဘကျထရီကို (၅၀) ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ (၈၀) ရာခိုငျနှုနျးကွားမှာ ပုံမှနျလေးရှိ နအေောငျ ထိနျးပွီး အားသှငျးပေး ထားတာ အကောငျးဆုံးပဲ။
အဲဒီလို အားသှငျး ထားမယျ ဆိုရငျ ဘကျထရီထဲက အိုငျယှနျး တှဟော အမွဲတမျး ပုံမှနျ လညျပတျ အလုပျလုပျ နနေိုငျတဲ့ အတှကျ ကနျြးမာရေး ကောငျးတယျ။ အားလုံးဝ ကုနျသှား ရငျ အိုငျးယှနျးတှေ ဆကျအလုပျ မလုပျနိုငျဘူး။ အဲဒီလိုပဲ အားအပွညျ့ကွီး စှတျသှငျး လိုကျရငျလညျး အိုငျးယှနျးတှရေဲ့ ပုံမှနျ လုပျငနျး စဉျကို နှောငျ့ယှကျရာ ရောကျတယျ။(၅၀) နဲ့ (၈၀) ကွားမှာ ရှိနအေောငျ ထိနျးပွီး အားသှငျးမယျဆိုရငျ အစှနျး နှဈဖကျလုံးက လှတျတဲ့ အတှကျ ဘကျထရီ ဟာ ကနျြးမာ တယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဘကျထရီကို (၅၀-၈၀) ကွားမှာ ရှိနအေောငျ တဈနလေုံ့း ထိနျးပွီး သှငျးပေး သငျ့တယျ။ အကွာကွီး ပလပျထိုးထားဖို့ မလို ဘူး။ (၅၀) ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ရောကျလာပွီဆို ခဏ ပလပျထိုးထား လိုကျ။ (၈၀) ရာခိုငျနှုနျး လောကျ ရောကျပွီဆို ပွနျ ဖွုတျ ထားလိုကျ။ ပွနျလြော့ သှားပွီဆို ခဏ ပွနျထိုး လိုကျနဲ့ လုပျပေးနိုငျ ရငျတော့ အကောငျးဆုံးပဲ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီလို လုပျရတာ အလုပျတော့ ရှုပျတယျ။ လူ အတျောမြားမြား လုပျနိုငျဖို့ မလှယျဘူး။ ဘကျထရီ သကျတမျး အရှညျဆုံး ဖွဈခငျြတယျ ဆိုရငျ အလုပျ သငျ့ဆုံး နညျးလမျးမို့ လို့သာ ပွောပွတာပါ။ မလုပျနိုငျတဲ့ လူတှေ အနနေဲ့လညျး စိတျပကျြ နစေရာတော့ မလိုပါဘူး။
(၄) ဘကျထရီ မပကျြစီးအောငျ ဘာတှေ ဆောငျ၊ ဘာတှေ ရှောငျရမလဲ။
ဘကျထရီ အကုနျပွောငျအောငျ သုံးပဈပွီး တဲ့နောကျ အကုနျပွညျ့တဲ့ထိ တဈလြှောကျတညျး သှငျးပဈ တာမြိုးတော့ လုံးဝ ရှောငျ။ သုည ရာခိုငျနှုနျး ကနေ တဈရာ ရာခိုငျနှုနျးထိ တဈခါတညျး သှငျးပဈ တာမြိုးဟာ ဖုနျးဘကျထရီကို လညျပငျး ညှဈတာပဲ။ ဘကျထရီတှဟော အဲဒီလို သုညကနေ တဈရာထိကို ဘယျနှခေါကျသာ ခံနိုငျတယျ ဆိုတာ စထုတျ ကတညျးက သတျမှတျပေးထားတာ ရှိတယျ။
ကိုယျက အဲဒီလို ဖုနျးဘကျထရီကို လညျပငျးမြားမြား ညှဈလေ သတျမှတျနှုနျး မွနျမွနျ ပွညျ့ပွီး ဘကျထရီ မွနျမွနျ အသကျထှကျလေ ပါပဲ။ အဲဒီလို သုည ကနေ တဈရာကို အားသှငျးမိတဲ့ အကွိမျတှမြေား လာလေ ဘကျထရီဟာ စှမျးဆောငျရညျ ကဆြငျးလာ လပေါပဲ။ ခဏလေးနဲ့ အားကုနျ သှားတာ မြိုးကနေ လုံးဝကို သုံးမရ တော့တဲ့ထိ ဖွဈသှားနိုငျ ပါတယျ။
(၅) ဖုနျးဘကျထရီ သကျတမျး ကွာကွာခံအောငျ ဘယျလို အားသှငျး ပစ်စညျးတှေ သုံးရမလဲ။
ဖုနျးဝယျ ကတညျးက တဈခါတညျး တှဲပါလာတဲ့ အျောရီဂငျြနယျ အားသှငျးကွိုးတှေ၊ အားသှငျးတုံးတှကေို သုံးတာ အကောငျးဆုံးပဲ။ တဈကယျလို့ အျောရီဂယျြနယျဟာ ပကျြသှား ရငျလညျး အျောရီဂငျြနယျ ကွိုးတှေ၊ အားသှငျးတုံးတှေ ကိုပဲ ထပျဝယျ သုံးတာ အကောငျးဆုံးပဲ။ အျောရီဂငျြနယျတှေ ဈေးသိပျကွီး နတောမြိုးနဲ့ တိုးလို့ မကျြရညျကြ ခငျြခငျြ ဖွဈလာ ရငျတော့ ဈေးလညျး သကျသာ စိတျလညျး ခရြမှာ မြိုးတှကေို ဒုတိယ အဆငျ့ အနနေဲ့ စဉျးစား သငျ့တယျ။
ကိုယျ့ ဖုနျးအမြိုးအစားမှာ သုံးနိုငျတဲ့ အခွားတံဆိပျနဲ့ ဘကျထရီတှေ၊ အားသှငျးကွိုး တှကေို အရငျဆုံးရှေး။ ပွီးရငျ ပါကငျ တှမှော ရေးထား တာတှေ လိုကျဖတျကွညျ့။ စနဈတကြ စမျးသပျ ထုတျလုပျ ထားတဲ့ ပစ်စညျး ဆိုရငျ ဘယျလို စနဈတကြ စမျးသပျ ထုတျလုပျ ထားတယျ၊ စညျးမဉျြး စညျးကမျးနဲ့ ဘယျလို ညီညှတျတယျ၊ ဘယျလို ထောကျခံခကျြ ရထားတယျ ဆိုတာတှေ ပါတယျ။
အဲဒီလို ဟာမြိုးတှကေ အျောရီဂငျြနယျ လောကျ နီးနီးလညျး စိတျခရြတယျ။ နာမညျ ရထားတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ဝယျသုံး တာလညျး တဈမြိုး စိတျခြ ရတယျ။ နာမညျ ရထား ပွီးသား ပစ်စညျးတှဟော အရညျအသှေး ကိုလညျး ထိနျး ကွတယျ။ ကိုယျ့ဖုနျးနဲ့ အားသှငျးကွိုးနဲ့ ဓာတျအား လကျခံနိုငျပုံခငျြး တူရဲ့လားလဲ သခြော စဈဆေးဖို့ လိုတယျ။ ဖုနျးက ဝပျဘယျလောကျ၊ အမျပီယာ ဘယျလောကျ လကျခံနိုငျလဲ သခြောကွညျ့။ အားသှငျးကွိုး ကရော ဝပျဘယျလောကျ၊ အမျပီယာ ဘယျလောကျ ပေးနိုငျ တာလဲ သခြောကွညျ့။ နှဈခု ကိုကျညီတယျ ဆိုမှဝယျ။ ဒါဆို အျောရီဂငျြနယျ မဟုတျရငျတောငျမှ တျောတျောလေး စိတျခရြ ပွီလို့ သတျမှတျ နိုငျတယျ။
ဈေးပေါတာတှကေို သတိထား။ ဈေးပေါတဲ့ အားသှငျးကွိုးတှေ၊ အားသှငျးတုံး တှဟော အရညျအသှေးလညျး ညံ့တာ မြားတယျ။ စံခြိနျစံညှနျး မီအောငျ မလုပျဘဲ၊ ပစ်စညျးဖွဈ ပွီးရော ဆိုတာမြိုး ထုတျထားတာမြိုးနဲ့ တိုးရငျ အန်တရာယျပါ ကရြောကျ နိုငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဈေးပေါတာတှေ ထဲမှာ တဈကယျ ကောငျးတဲ့ ဟာလေး တှေ လညျး ပါတတျ ပါတယျ။ အမြားစု ကတော့ စိတျမခရြ ပါဘူး။လနျဒနျ မီးသတျဌာနက ထုတျပွနျခကျြကို ကွညျ့ပါ။ အရညျအသှေး မမီတဲ့ အိုငျဖုနျး အားသှငျးကွိုး အတုတှကွေောငျ့ ဓာတျလိုကျတာ၊ လကျမီးလောငျ တာ၊ အိမျပါ မီးလောငျတာမြိုး တှပေါ ဖွဈပှားနရေ သတဲ့။ အားသှငျးကွိုး အသဈ ဝယျလာပွီး ပွီဆိုရငျ တဈညလောကျ ဖွဈဖွဈ ပလပျထိုးထားကွညျ့ လိုကျပါ။
ကိုယျကလညျး သတိလေး နဲ့တော့ စောငျ့အိပျပေါ့။ မနကျ ရောကျတဲ့ အခါ ဖုနျးလညျး တအား ပူတကျနတောမြိုး မဖွဈဘူး၊ တဈခွား ပွဿနာလညျး မပျေါဘူးဆိုရငျ စိတျခရြတဲ့ ပစ်စညျးလို့ ယဘေုယြ သတျမှတျ နိုငျတယျ။ ဖုနျးဘကျထရီအတှကျ အန်တရာယျ အကငျးဆုံး၊ အထိရောကျဆုံး ဖွဈအောငျ မူရငျး အားသှငျးကွိုး၊ အားသှငျးတုံးတှကေိုသာ အသုံးပွုပါ။ တဈခွား တံဆိပျနဲ့ ဝယျမညျ ဆိုပါက အာမခံခကျြ သခြောပေးသော ပစ်စညျးမြား ကိုသာ သုံးစှဲပါ။
-ဖုနျး အရမျးမပူ ပါစနေဲ့။ ညဘကျ ပလပျထိုး အားသှငျးပွီး အိပျမညျ ဆိုလြှငျ ဖုနျး ကာဗာ ကိုတော့ ခြှတျထား လိုကျပါ။
-ဖုနျး ဘကျထရီ အကနျြးမာဆုံး ဖွဈစေ လိုလြှငျ ဘကျထရီကို (၅၀-၈၀) ရာခိုငျနှုနျး ကွား ရှိနအေောငျ ထိနျးပွီး အားသှငျးပေးပါ။
– ဘကျထရီ လုံးဝ အားကုနျပွီး ပိတျသှားသညျ အထိ မသုံးပါနဲ့။ ဘကျထရီ သုည ရာခိုငျနှုနျးမှ တဈရာ ရာခိုငျနှုနျးသို့ တောကျလြှောကျ အားသှငျးခွငျးမြိုး ကိုလညျး ရှောငျပါ။
ဖုန်းသုံးသူတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ ဖုန်းဘက်ထရီအကြောင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:43 PM Rating:5၁) “ဖုန်းကို တစ်ချိန်လုံး ပလပ်ထိုးထားတာ ဘက်ထရီ ပျက်စီးစေတတ် ပါသလား” ================================================ ဖုန်းကို မည်မျှ ကြ...